I-Chrome 88 ifika nokuthuthuka kwezokuphepha, ithi sala kahle ku-Flash, FTP, Yosemite nokuningi | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule I-Google imemezele ukwethulwa kwenguqulo entsha ye-Chrome 88 nale nguqulo entsha iletha izici ezintsha nezithuthukisi, kufaka phakathi imodi emnyama ethuthukisiwe ye-Windows 10, ukusesha ngamathebhu nokuningi, imiyalo evumela ukungena kancane.
Ekuqaleni Olunye ushintsho olukhulu ku-Chrome 88 ukuthi ukuxhaswa kwe-Adobe Flash Player kususwa unomphela. Eqinisweni, iFlash ifinyelele ekugcineni kwayo ngokusemthethweni (EoL) ngoDisemba 31, 2020, lapho i-Adobe iyeka ngokusemthethweni ukusekela isoftware. I-Adobe iphinde yaqala ukuvimba okuqukethwe kweFlash ngoJanuwari 12, njengengxenye yesipikili sayo sokugcina ebhokisini lomngcwabo.
Olunye ushintsho olwethulwe kule nguqulo entsha ukuthi kusuka ku- I-Chrome 88 ayisayisekeli i-FTP, okungukuthi, amakheli ohlobo ftp: //. Ngokuya nge-Google, njengoba i-Chrome nezinye iziphequluli ziqonde kuwebhu ebethelwe njalo, kunengqondo ukususa izivumelwano ezindala ezinjengalezi. Isibonelo, i-Chrome 72 futhi kamuva isuse ukwesekwa kokuthola imithombo engaphansi yedokhumenti nge-FTP nokunikeza izinsiza ezisezingeni eliphezulu ze-FTP. Ukuzulazula kuma-URL we-FTP kukhombisa uhlu lohla lwemibhalo noma ukulanda, kuya ngohlobo lwensiza.
Ngaphezu kwalokho, iGoogle ishiya ngokusemthethweni ukwesekwa kweMac OS X 10.10 I-Yosemite ku-Chrome 88.
Singathola futhi i- ukusekelwa kokuhlola kokusesha okusheshayo kwamathebhu, eyayikhawulelwe ngaphambilini kunguqulo ye-Chrome OS. Umsebenzisi angabona uhlu lwawo wonke amathebhu avulekile bese ehlunga ngokushesha ithebhu oyifunayo, noma ngabe kusefasiteleni lamanje noma kwelinye.
Okunye okusha kwe-Chrome 88 yilokho kungeze amandla okuphatha okhiye aguquguqukayo ngokuhlukaniswa ngezinqubo ezihlukile. Ukuhlukaniswa kusho ukuhambisa abalawuli bokuqukethwe behlukanise izinqubo maqondana nomthombo (Umsuka - isizinda + imbobo + olandelwayo), hhayi isiza, okusho ukuthi, kuvumela ukuhlela ukuhlukaniswa kube yizinqubo ezahlukahlukene ngokususelwa kusizinda somthombo hhayi esizeni nakho konke ukufakwa okungajwayelekile emakhasini.
I-Chrome isekele Windows 10 itimu emnyama isikhathi esithile, kodwa I-Chrome 88 iyithuthukisa kancane. Itimu emnyama manje isebenza kumigoqo yokuskrola yamakhasi amaningi wangaphakathi we-Chrome. Lokhu kufaka izilungiselelo, amabhukumaka, umlando, ikhasi lethebhu elisha, nokuningi. Noma kunjalo, okwamanje ayitholakali kumawebhusayithi asekela izingqikithi ezimnyama.
Izici eziningi ezintsha kuzo zonke izinhlobo ze-Chrome zifihliwe futhi i-Chrome 88 iyathinteka. I-Google ifake eziningi zalezi zinguquko kusayithi yayo yokuthuthuka naku-Chromium blog njenge:
Digital Products API: izinhlelo zokusebenza zewebhu ezishicilelwe ku-Google Play Isitolo manje sezingasebenzisa inkokhelo ye-Google Play Isitolo njengezinhlelo zokusebenza zendabuko.
I-WebXR: Ukulinganiswa Kokukhanyisa kwe-AR: Ngokuqukethwe kwe-AR ne-VR ku-Android, ukulinganiswa kokukhanyisa kungasiza ukwenza amamodeli abukeke engokwemvelo kakhulu futhi awenze 'alingane' ngendlela engcono kakhulu kumvelo yomsebenzisi.
I-Anchor target = _blank isho rel = noopener ngokuzenzakalela: Ukuvikela ekuhlaselweni kwe-tab-napping, i-anchor target _blank izoziphatha sengathi i-rel isethwe ku-noopener.
Isilinganiso sesici se-CSS- Ikuvumela ukuthi ucacise ngokusobala isilinganiso sesici sanoma iyiphi into ukufeza isimilo esifanayo njengento efakwe esikhundleni.
I-Chrome 88 izama indlela encane, engaxakekile yokucela izimvume. Esikhundleni sewindi le-pop-up elimboza okuqukethwe kwesayithi, kuvela "isithonjana" esisha ngakwesobunxele se-URL.
Ukuhlolwa kwetimu okukhanya okucacisiwe nokukhanyayo kwama-Chromebook: Itimu ingenziwa isebenze kumenyu Yezilungiselelo Ezisheshayo.
Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 88 kuLinux?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Chrome 88 ifika nokuthuthuka kwezokuphepha, ithi sala kahle ku-Flash, FTP, Yosemite nokuningi